ọdịda agbata obi na-atụghị anya monstrosities. Ndị dọkịta Jekyll ndị nwere ike amabeghị na ha bụ Mr Hyde. Na mgbe ha dị, ọ bụghị na enwere mgbanwe ọ bụla. Ọ ga-abụ n'ihi okwu ochie ahụ nwere ike ime ka akpụkpọ ahụ gị guzosie ike "Abụ m mmadụ, ọ dịghịkwa ihe mmadụ bụ onye mba ọzọ n'ebe m nọ", n'agbanyeghị na ọ dị njọ n'ụwa a.
Anumanu, site n'ime ulo rue nke kachasi ike, amaghi aghụghọ ma obu iro. Ọ bụ ihe gbasara ọdịdị ahụ nke nwere anya onye na-eri anụ n'ihu na nke ndị nwere ike ime n'akụkụ, ka ha wee hụ ka ha rutere ...
A naghị ahụ mmadụ ka ọ bịarute. Na ụbọchị ọhụrụ ọ bụla nke chi bọrọ, anụ ọhịa ọhụrụ na-apụta site na ebe a na-atụghị anya ya. Ihe akaebe nke obi ọjọọ na-afụ ụfụ, echiche dị mfe nke ilele eziokwu anya (kwụsịtụrụ n'etiti chemistry nke ọgwụ ọjọọ na akọnuche e nyere n'ime abis), na-atụ egwu.
Na March 2016, n’otu ọnụ ụlọ dị ná mpụga Rom, ụmụ okorobịa abụọ sitere n’ezigbo ezinụlọ nọrọ ọtụtụ ụbọchị na-eri oriri na ọṅụṅụ, na-enwekarị cocaine, ọgwụ ọgwụ na mmanya na-aba n’anya. Ha kpebiri ịkpọ mmadụ, mgbe ha kpọchara ọtụtụ ndị enyi ha na-apụghị ịza ajụjụ ma ọ bụ na ha enweghị ike ịza, ha hụrụ Luca Varani, bụ́ nwa okorobịa ha na-amabughị. Ha nyere ya ọgwụ ọjọọ na ego maka inwe mmekọahụ. Ha na-ekpori ndụ ruo mgbe ha malitere ịta ya ahụhụ wee were mma na hama gbuo ya. Ọ dị afọ 23, nwa nwoke nke ezinụlọ dị umeala n'obi bi n'ebe dịpụrụ adịpụ, bụ́ ezigbo nwa ewu nke na-ebi ndụ otú o nwere ike. Ọ dịghị onye ghọtara ihe mere ha ji mee ya, enweghị azịza maka oke egwu. Site n'ụlọ mkpọrọ otu n'ime ndị ogbu mmadụ kwuru na "ha chọrọ ịma ihe ọ dị ka igbu mmadụ." Ha dị afọ 28 na 29: Manuel Foffo, onye si n'ezinụlọ ndị ahịa, na Marco Prato, onye na-ahụ maka ọha na eze a ma ama nke abalị nwoke na nwanyị Rome, nwa nke prọfesọ mahadum.
El Onye edemede Nicola Lagioia Okwu ahụ riri ya ahụ́. Ọ ka nwetara ihe nrite Strega maka akwụkwọ akụkọ ya gara aga, ihe nrite kacha mkpa na Italytali, ma nyefee afọ anọ nke ndụ ya maka akụkọ a. Ọ gwara ndị niile metụtara ya, ndị enyi na ndị ikwu nke ụmụ nwoke atọ ahụ, kwenye na nyocha na ikpe na ọbụna degara otu n'ime ndị mere mpụ akwụkwọ ozi. Ọ banyere n'ime abalị ndị Rom kacha gbaa ọchịchịrị wee banye n'ebe ndị Rom na-achị achị na-enweghị ike ịnweta. Ihe si na ya pụta bụ isi akụkọ ihe mere eme: nyocha banyere ọdịdị mmadụ n'okpuru ịgbachi nkịtị nke okporo ụzọ efu nke obodo ebighi ebi.
Ị nwere ike zụta akwụkwọ "Obodo nke Ndụ", nke Nicola Lagioia dere, ebe a:
Tags Akwụkwọ ndị dị ugbu a, Nicola Lagioia, Akwụkwọ akụkọ thriller